Khabiirka Cilmi-baarista wuxuu sharraxayaa sida looga hortago Kumbuyuutarkaaga Boostada
Nik Chaykovskiy, oo ah Simalt Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegaya in emaylka spam ay noqdeen wax caadi ah qof kasta oo isticmaala internetka. Inta badan dadka isticmaala internetka waxay helaan maalin walba e-mail spam oo badanaa la siiyaa rikoodhka spamka. Thanks to filimka spam-casriga ah ee casriga ah, dadka isticmaala waxay tirtiri karaan inta badan boosteejada spam. Mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in laga yaaba ku saabsan ilaha iyo ujeedada ka dambeeya emails spam - single premium long term care insurance. Xaaladaha intooda badan, emayadahaani waxay ka yimaadan shabakad. Botnets waa mid ka mid ah hanjabaadaha ugu xun ee shabakada internetka ee ammaanka. FBI-da dhawaan, ayaa ku waramaysay in Maraykanka, 18 kombuyuutarro ay halis geliyeen kumbuyuutar kasta hal ilbiriqsi.
Waa maxay Botnet?
Botnet wuxuu ka kooban yahay 'kombiyuutaro badan', kuwaas oo gacanta ku haya qofka weerarka geysta, sida caadiga ah iyadoon ogaysiiska milkiilaha. Weeraryahanku wuxuu abuuraa boorso wuxuuna u diraa kombiyuutarada shakhsi ahaaneed. Halkan, waxay u diri karaan amar iyo kantaroolka C & C signalka server ka. Kombuyuutar kaas oo uu ku dhaco nacasku waa mid aan hoos ku dhicin amarrada mulkiilaha. Weeraryahanku hadda wuxuu hirgelin karaa amar sida weerarka DDoS ee bogga gaarka ah. Botigu wuxuu ka kooban yahay qaybta shaqada ee botnet. Ka codsashada codsigan, qofka weerarka ka shaqeeya wuxuu shaqaaleysiiyaa koofiyada madow
C & C si qamaaraya: Habkani wuxuu ka kooban yahay tilmaamo u dirista shabakada qadka iyo si toos ah u siida serverka. Waa aragti xeelad ah ee isgaadhsiinta.
Isku day in aad la xiriirto Botigu wuxuu si toos ah ugala xiriiri karaa baas kale. Tani waxay ka dhigaysaa qaab u eg qaabka loo dirayo tilmaamaha iyo helista jawaab celin. Habkan, bot-master wuxuu xakameyn karaa botnetka guud.
Hybrid: Taqshaddani waa isku dhafka labada hab ee kor ku xusan.
Marka la bilaabayo botnet guuleysto, weeraryahanku wuxuu fulin karaa dembiyada internetka sida xatooyada xogtaada. Macluumaadka shakhsiyeed sida emails iyo passwords ayaa ku dari kara iyada oo macnaheedu yahay. Caadi ahaan, xatooyada kaararka deynta, iyo sidoo kale lumista ereyada, waxay ku dhacdaa weerarada botnet. Isticmaalayaasha macluumaadka xasaasiga ah sida keydka aqoonsiga, macluumaadka dhaqaale iyo sidoo kale khatarta macluumaadka lacag bixinta internetka ee khatarta ah in lagu soo weeraro kambiyuutarradan.